RASMI: Kadib Bahdilaadii Uu Ku Sameeyay Gaalkii Diinta Islaamka Wax Ka Sheegay, Feedhyahanka Muslimka Ah Ee Khabib Oo Ganaaxii Kaga Soo Labaanaya Kulan Dal Islaam Ka Dhacaya. - Jigjiga Online
HomeCiyaarahaRASMI: Kadib Bahdilaadii Uu Ku Sameeyay Gaalkii Diinta Islaamka Wax Ka Sheegay, Feedhyahanka Muslimka Ah Ee Khabib Oo Ganaaxii Kaga Soo Labaanaya Kulan Dal Islaam Ka Dhacaya.
Feedhyahanka muslimka ah ee Khabib Nurmagomedov ayaa ugu danbayn ku soo laaban doona goobta dagaalka UFC kadib markii uu ku soo jiray sagaal bilood oo ganaax ah iyada oo sababtu ahayd qalalaasihii uu ka abuuray guushii uu ka gaadhay gaalkii diintiisa Islaamka Aflagaadeeyay ee Conor McGregor.
Bishii October 2018 kii ayaa Khabib Nurmagomedov ugu danbaysay saaxada feedhka iyo ladginta UFC kadib markii uu guul taariikhi ah ka gaadhay Conor McGregor balse uu ganaax sagaal bilood ah ku mutaystay in uu dagaal rabshad ah ku laayay dadkii la socday McGregor.
Laakiin hadda waxaa lagu dhawaaqay dagaalka xiga ee uu Khabib Nurmagomedov gali doono kadib ganaaxii xooganaa ee la soo saaray wuxuuna fursad u helay in kulankiisa soo socdaa uu ka dhici doono dal ay diinta Islaamka ka midaysan yihiin.
Feedhayanka Muslimka ah ee u dhashay dalka Russia ee Khabib Nurmagomedov ayaa kulankiisa xiga ka hor iman doona Dustin Poirier oo u dhashay USA kaas oo Khabib ay isku wajihi doonaan UFC 242 oo ka dhici doona Abu Dhabi.
In Khabib uu kulankiisa ganaax ka soo laabasho ku ciyaari doono Abu Dhabi waxay uga dhigan tahay in uu heli doono taageero layaableh maadaama oo uu aduunka muslimka ah ku soo jiitay qaabkii uu bahdilay gaalkii diinta islaamka wax ka sheegay ee McGregor.
Waxa kale oo la shaaciyay in kulanka UFC 242 ee Khabib uu ku yeelan doono Abu Dhabi ee uu kaga hor imanayo Dustin Poirier uu dhici doono September 7 markaas oo uu si xor ah Khabib u dhamaysan doono ganaaxa sagaalka bilood ee uu ku soo dhex jiray.
Khabib ayaan wali wax guuldaro ah soo arag wuxuuna hadda taageero layaableh ka abuurtay aduunka gaar ahaan umada muslimiinta ah oo si wayn ugu bogay qaabkii uu Conor McGregor ku ceebeeyay.
Intii lagu jiray diyaar garowgii UFC 229 ee dagaalkii dhex maray Conor McGregor iyo Khabib, waxaa aduunka qabsaday aflagaadadii uu Conor McGregor u gaystay Khabib iyo diinta islaamka taas oo si wayn uga cadhaysiisay Khabib.
Khabib ayaa xili horeba bahdilay Conor McGregor wuxuuna ku dhala dhacay cadhadii uu ku difaacayay diintiisa iyo sumcadiisa ee uu Mcgreagor saxaafada ku hor aflagaadeeyay markii ay diyaar garowga ku jireen.
Markii uu Khabib karbaashay McGregor waxa uu raaciyay shaqaalihiisa oo uu dhibaato badan u gaystay taas oo u keentay ganaax sagaal bilood iyo £380,000 kun oo gini ah.
Si kastaba ha ahaatee, hadda waxa uu Khabib u balansan yahay in September 7 uu ka soo muuqan doono UFC 242 oo uu Abu Dhabi ku wajihi doono Dustin Poirier.